Huawei ga rụpụta ọkara nke ekwentị ndị ọ chepụtara n'afọ a | Gam akporosis
Huawei ga-anọ n'ọnọdụ belata mmepụta nke ama ya na ọkara afọ a na naanị ihe kpatara iji belata ụgwọ; niile n'ihi nsogbu ndị siri ike ọ na-enwe n'ihi enweghị ike ịnwe mobiles na-enye Google Play Services.
Ma obu na Onye Asia buru ibu aghala ịchọta onwe gị n'ahịa hapụrụ gị n'azụ n'akụkụ ndị a nke West. A Huawei na na-eche Biden Nwere ike inyocha ihe niile mere na Trump ochichi na mmachibido iwu iji ọrụ Google Play.
Ọbụna mgbe eresịla gị Sọpụrụ ika, Huawei na-aga n'ihu na-agbanye onwe ya iji belata mmetụta dị egwu na ahịa. Ma nke ahụ bụ dị ka Nikkie Asia si kwuo, Huawei gaara agwa ndị na-eweta ya na iwu maka ngwa ngwa ama ya ga-egbutu ihe karịrị ọkara afọ a. Kpọsị 60%.
Nkwupụta ahụ hotara isi mmalite sitere n'aka ọtụtụ ndị na-ere ahịa bụ ndị kpughere na ụlọ ọrụ ahụ na-ezube ịtụ ihe maka ya n’agbata nde iri asaa na nde iri asatọ n’afọ 70. Ọ bụrụ na anyị maara na ụlọ ọrụ ahụ kesara ekwentị igwe 189, ọnụọgụ ahụ karịrị nke doro anya.
Otu ihe ahụ akụkọ na-egosi na ihe ndị ahụ metụtara 4G mobilesDị ka ọ na-enweghị ikikere nke United States ịbubata ihe maka 5G smartphones.
Ka ọ dị ugbu a, ọ nwere ike ịkọwapụta nke ọma na mmachi mgbochi nke afọ gara aga site n’aka nchịkwa nchịkwa na-eweta ezigbo oghere na akụ na ụba nke ụlọ ọrụ China. Ma ọ gwụla ma gọọmentị ọhụrụ ahụ esighi ike na ntuziaka, ihe niile yiri gosi na Huawei ghaghi ighachi onwe ya rue mgbe ochotara onwe ya na oghere ebe ọ nwere ike ịga n'ihu na-eto.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Huawei » Huawei nwere ike belata mmepụta ekwentị ya na ọkara afọ a
Otu esi emepụta usoro enyemaka Google ọhụrụ